Dumarka Swedishka oo garaaca ragga | Somaliska
Dumarka Swedishka oo garaaca ragga
Cilmi baaris lagu sameeyay dagaalada dhexmara lamaanayaasha Swedishka ayaa lagu soo bandhigay in dumarka Sweden ay si la mid ah ragga u gacanta ugu qaadaan lamaanahooda. Baaritaankaan oo uu sameeyay machad ku yaala Göteborg ayaa lagu wareystay dad ka baran 1400 qof. Ragga la wareystay ayaa 8% ilaa 11% waxay sheegeen in lamaanihiisa ay gacanta u qaaday.
Dumarka ayaa sidoo kale 8% waxay sheegeen in raggu ay garaaceen. Balse markii si qoto dheer loo sii wareystay ayaa warbixinta lagu ogaaday in qiyaastii 11% ragga la wareystay ay iyaga laftooda gacanta u qaadeen dumarka, sababta ka dambaysa gacan hadalka dumarka ayaa 30% waxay ku sheegeen in ay isdifaacayeen halka inta kale ay iska garaaceen ninkooda.
Sababta raggu gacanta ugu qaadaan dumarka ayaa inta badan ka dambaysa ka dib muran dhexmaray lamaanayaasha ama ragga oo dareeay bahdil. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay in dumarku ay yihiin kuwa ugu badan ee loo geysto falalka la xiriira kufsiga iyo galmada, balse xitaa ragga 3.5% ay sheegeen in dumarku ay kufsadeen.
Si kastaba ha ahaatee warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in dumarka ay la soo daristo xanuuno iyo walwal badan ka dib marka ay dagaal la galaan ninkooda.
Waalidiin la walaacsan falal dhac ah oo ay geestaan dhalinyarro soomaali ah
Waa cajiib tolow Somalida iyagana cilmi baaris in lugu sameeyo ayeey ku fiicneed. laga heli lahaa dumar badan oo ragoodi kufsaday gaar ahaan kuwa yurub jooga. hhhhhhhhhhhhhhhhh kaftan ha u qaadan markeey Raga jaadka cunaan ka dibna ee isku dayaan is dadabaalees iyo hurdaa i heeysa camal laga yaabanaa in dumarkoodii ee u baahnaadaan habeenkaas odiga xoog looga qaata asagaa dhibsanaayaa taas camal ayeey ka wadaan swedishka in ragoodii la kufsaday ..